एनसेलको २० प्रतिशत कर नै २ सय ८३ करोड ! - Arthatantra.com
एनसेलको २० प्रतिशत कर नै २ सय ८३ करोड !
काठमाण्डौं । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको २० प्रतिशत स्थानीय साझेदारको सेयर स्वामित्व परिवर्तनका लागि हिजो सोमबार २ सय ८३ करोड रुपैयाँ कर भुक्तान गरेको छ।
नेपालको कानुन अनुसार २० प्रतिशत सेयर नेपाली नागरिककै नाममा रहनुपर्छ। यही प्रावधान अनुसार निरजगोविन्द श्रेष्ठका नाममा एनसेलको २० प्रतिशत सेयर रहेको थियो, जसमा टेलियासोनेराको ‘इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट’ थियो। व्यवहारिक रुपमा यो टेलियासोनेराकै स्वामित्वको सेयर भए पनि कानुनी रुपमा श्रेष्ठको नाम थियो।
श्रेष्ठ र मलेसियाको एक्जियटाले स्थानीय साझेदार छानेको सुनिभेरा बीच ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको एसपिए ९सेयर खरिद सम्झौता० थियो। तर आज बुक भ्यालुका आधारमा २८३ करोडको कर भुक्तान गरिएको हो। यो हिसाबले २० प्रतिशत सेयरको भ्यालुएसन ११ अर्ब रुपैयाँमा भएको छ।
बाँकी २४।५ प्रतिशत स्वामित्व चाहिँ एसइए टेलिकम नामको कम्पनीसित छ। एसइए टेलिकम नेदरल्यान्डसको कानुन अनुसार ३० जुलाई २००८ मा दर्ता भएको कम्पनी हो जसको स्थापना र व्यवस्थापन भाइजर ग्रुपले गर्छ।
भाइजर ग्रुपमा को-को छन्, कुनै पनि सार्वजनिक कागजातमा खुल्दैन। सार्वजनिक कागजातमा लेखिएको हुन्छ, एसइए टेलिकमका अल्टिमेट बेनेफिसियल ओनरहरु हाइ नेट वर्थ भएका व्यक्तिहरुको समूह हो, जसको सम्बन्ध लामो समयदेखि भाइजर ग्रुपसित छ।
को हुन् त ती हाइ नेट वर्थ भएका व्यक्तिहरुरु परिचय नखुल्ने यस्तै कम्पनीहरुका वास्तविक मालिकहरुको पहिचान खुल्ने कागजातसहितको दस्तावेज पनामा पेपर्समार्फत् लिक भएपछि अहिले विश्वभर हङ्गामा मच्चिरहेको छ।
ुएनसेलबाट लगानी झिकेर एक्जियटालाई बुझाउने प्रक्रिया पूरा भएको घोषणा गर्न पाउँदा म धेरै खुसी छु,ु टेलियासोनेराका अध्यक्ष तथा सिइओ जोन डेन्नेलिन्डले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
३० चैत २०७२, ९.००
वि.सं.२०७२ चैत ३० मंगलवार ११:३४ मा प्रकाशित
अघिल्लाे [अपडेट] खोटाङ बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या २४ पुग्यो ( हेर्नुहोस् नामसहित)
पछिल्लाे इन्भेष्टमेण्ट बैंकले यसरी बाँड्दैछ आज सेयर !